Mpamatsy boky sy orinasa - Mpanamboatra Manual China
15 amin'ny 1 Combo Heat Press Machine
15 amin'ny combo combo no milina fanodinana hafanana lafo indrindra, afaka mandefa sary, teny amin'ny landihazo, fibre, vy, kitapo, tsihy totozy, ankamantatra, taila, lovia, vera sns, mety hamokatra fanomezana, doka ary entana hafa tsy manam-paharoa & mahafinaritra hafa. Ampiasao ity milina ity mba hanaovana akanjo Halloween farany na akanjo Halloween ary hanaovana akanjo Krismasy.
Milina fanontam-pirinty hafanana nomerika
Ity dia milina fanamoriana hafanana satroka vaovao novolavolain'ny orinasanay. Ity gazety ity dia natao ho an'ny fampiasana ara-barotra sy ny fampiasana an-trano. Izy io dia afaka mahay mampiditra famindrana, taratasy, isa ary sary amin'ny satroka, satroka baseball ary zavatra hafa. Ity masinina ity dia manana endrika ivelany mahafinaritra miaraka amina fahaiza-manao kanto. Ary io no milina mandroso indrindra amin'ny tsena famindrana gazety. Ity press press ity dia matevina izay mamonjy habaka. Izy io dia hamokatra vokatra mahafinaritra ao anatin'ny minitra vitsy ary hankafy ny fahatsiarovana ianao isaky ny mampiasa.